ओली रिसाएपछि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित, अब कहिले बस्छ ? — Imandarmedia.com
ओली रिसाएपछि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित, अब कहिले बस्छ ?
काठमाडाैं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ । शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले २५ गते स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको थियो । तर आज बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डा तय गर्न नसकेपछि बैठक स्थगित भएको हो ।
सचिवालय बैठक चलिरहेका बेला चर्काचर्की भएपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओली बैठक नै छोडेर हिडेका थिए । ओली हिडेपछि सचिवालय बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो ।
सचिवालय बैठकपछि दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच छलफल भएको थियो । दुई जनाको छलफलपछि भोलि (बिहीबार) बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको हो । नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलले भोलिका लागि बोलाइएको बैठक केही समयपछि सार्न दुई अध्यक्ष सहमत भएको बताए।
नेकपा बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका अनुसार प्रधानमन्त्री हिँडेपछि बाँकी ८ जनाले सचिवालय बैठक डाक्ने/नडाक्ने, कस्तो प्रस्ताव पेस गर्ने भन्नेबारे दुई अध्यक्षले निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। ‘प्रधानमन्त्री बैठकमा आउनेबित्तिकै खासै नबोलीकन अप्ठेरो भयो आराम गर्न जान्छु भनेर हिँड्नुभयो,’ खनालले भने,‘लामो समय उहाँ नआएपछि हामी पनि हिँड्यौं।’
सचिवालय बैठक सकिएपछि ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा एक्लाएक्लै भेट भएको थियो। उनीहरू दुबै जना बैठक दुई-चार दिन सार्न सहमत भएका छन्। यसअघि शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आत्मआलोचना गर्दै सबै जना मिलेर अघि बढ्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिएका थिए।
भोलि बस्ने स्थायी कमिटी बैठकका लागि दुबै अध्यक्षले प्रस्ताव तयार गर्ने भनिएको थियो। तर प्रस्ताव तयार गर्ने विषयमा दुई अध्यक्षबीच सहमति हुन सकेको छैन। शनिबार भएका सहमतिबाट प्रधानमन्त्री पछि हटेको आरोप प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल खेमाले लगाएका छन्।
पहिला सहमति भएअनुसार कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा प्रचण्डको भूमिकालाई थप प्रष्ट्याउने गरी स्थायी समितिमा प्रस्ताव लैजाने, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने र केही मुख्यमन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने सहमतिबाट प्रधानमन्त्री ओली पछि हटेको प्रचण्ड-नेपाल खेमाको आरोप छ।
वैशाख १७ गतेको बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखेका प्रधानमन्त्री ओलीले २० गतेको सचिवालय बैठकमा उक्त प्रस्तावबारे केही पनि उल्लेख नगरेपछि पछिल्ला दिनमा गौतम पनि आफ्नो हुर्मत लिएको भन्दै रूष्ट बनेका उनीनिकट नेताहरूले बताएका छन्। बैठकको अर्को मिति एक/दुई दिनमा छलफलपछि टुंगो लाग्ने भएको छ ।